Amazon Associates Central na eme nzuzu dị njọ dị ka Commission | Martech Zone
Satọde, 30 Juun 2007 Mọnde, Jenụwarị 8, 2018 Douglas Karr
John Chow na nso nso a dere ihe kpatara na ọ naghị eji Amazon maka ahịa mmekọ, isi ihe mere thelọrụ dị oke ala. Achọrọ m isonyere John maka ebumnuche dị iche.
Amazon na-eme ka ọ bụrụ ihe na-agaghị ekwe omume iji ngwugwu Associates ha. Ọ bụ ara kpamkpam oge ọ bụla m gara ebe ahụ maka njikọ, enweghị m ike ịnweta ya. Lee otu ihe atụ. Azụtara m ìgwè anụ ụlọ n'oge na-adịbeghị anya: Otu esi agbanwe Omume Mass site na Harnessing our True Nature (site Akara Earl) Mgbe ị gụsịrị ya na Hugh MacLeod's blog - gapingvoid.
M banye Amazon.com Associates Central.
M na-aga Mee njikọ.
Ahọrọ m Njikọ ngwaahịa ebe m mara aha ngwa ahia ugbua.
M banyere Atụrụ ya na udi otu ngwa ahia Akwụkwọ.
Enwetara m nsonaazụ 10. N'ime akwụkwọ iri, akwụkwọ Mak bụ naanị otu a na-akpọ "Herd" mana ọ bụ nọmba 10 na ndepụta ahụ. Nọmba 3 bụ uche nzuzo nke Elephant. Daalụ Amazon!
Ugbu a, m ga-pịa “Nweta HTML” nke na-ewetara m peeji dị egwu iji mee njikọ m:
Ọ bụrụ na m họrọ ndị mmekọ dị iche-ID ugbu a, ibe ahụ na-ehichapụ nhọrọ m niile na m ga-amalitekwa ọzọ. Njikoka
M idetuo na mado koodu n'ime WordPress ma biputere ya.
Ihe onyonyo a egosighi. M chọpụtara na Amazon na-adịghị gụnyere onye ikwu ụzọ ka ihe oyiyi via ha na ngalaba. Ha zaghachiri m azụ ma gwa m na ọ bụ n'ihi na m ga-eziga ihe oyiyi ahụ na sava m. Ị na-egwusa m egwu? Ndi Amazon abughi ulo nke S3?
Mmelite: Ọ bụrụ na ị ka na-alụ ọgụ maka ijikọ njikọ gị, aga m akwado iji ya Onye Associated's SiteStripe!
Tipsfọdụ Product Mmelite Atụmatụ maka Amazon:
Tinye ụdị “Get Links” n’ụdị ụfọdụ nbanye peeji nke nbanye.
Ka m wuo ọkacha mmasị m template ma chekwaa ya na akaụntụ m (naanị m na-eji 1 layout).
Mgbe m mere nchọta maka ihe ahụ, zaghachi HTML HTML ahụ ahọpụtara m na nzọụkwụ 2)
Ekwula na ọ bụ HTML belụsọ na ọ bụ HTML. HTML ị nyere enweghị ikike URI ka ihe oyiyi!
Biko were pikselụ nsuso ihe oyiyi site na njikọ ederede dị mfe. Geesh. Ọ hoses m okirikiri nhọrọ ukwuu. Lelee anya n'okpuru ebe m nwere njikọ Amazon na "Ajax". Rịba ama ọdịiche dị na ya?
Nke a ga - ewe nkeji iri abụọ m iji chọta koodu darn ma were ya gbadaa n'okpuru nkeji. N'ikwu eziokwu niile, echeghị m na atụmatụ nke ọrụ mgbakwunye a agbanweela kemgbe ọ malitere. Njikọ njikọ ahụ ka na-etinye nkwado azụ (Amazon - lee anya Ajax na nhọpụta akwụkwọ gị). Ọ dị egwu n'ụbọchị 1 ma ọ dị egwu ugbu a. Ya mere,… ọ bụghị naanị na ọrụ dị ala, interface ahụ na-eme nzuzu.
PS: Ejikọtara njikọ nke Herd na nke m Ibe akwukwo. Ana m ele anya otu a!
Tags: amazonamazon njikọ mmekọamazon akpakọrịtaamazon na-akpakọrịta sitestripesitestripe
Jun 30, 2007 na 8: 12 PM
Nwere ike ịnwale WP ngwa mgbakwunye maka Amazon…
Jun 30, 2007 na 8: 22 PM
Nke ahụ bụ otu n'ime plugins kachasị mma m hụtụrụla. O di nwute, m na-eji editọ edere ebe m tinye ọtụtụ ederede na multimedia na post m na mgbakwunye ahụ adabaghị. Ọ bụ beta kemgbe ọtụtụ ọnwa ugbu a - enwere m olile anya na ọ ga - enweta ya na onye nchịkọta akụkọ ọ bụla dị ugbu a!
Nakwa, ndị na-ede akwụkwọ mgbakwunye ọ bụla kwesịrị ile anya - nke ahụ bụ otu ihe mgbakwunye!
Ọzọkwa, Amazon kwesịrị ịkpọtụrụ manalang wee goro ya ka ọ rụgharịa ibe ha peeji !!! 🙂
Jul 3, 2007 na 10: 36 AM
Ọ ga-adịrị gị mfe iji ngwa mgbakwunye a, ọbụlagodi na WP ndabere. Mụ onwe m na-ejikwa onye editọ doro anya, mana na ndabara WP nwekwara nke editọ ederede bara ọgaranya arụnyere. Naanị jiri ndozi ederede bara ọgaranya na ndabara, ma gbanwee tab maka nlele koodu iji rụọ ọrụ ọ bụla ịchọrọ. Weghagharịa ihu na ederede ederede bara ọgaranya iji dobe ma dọrọ ihe ndị amazon na post gị. Ọ bụ naanị mgbakwunye ọzọ, mgbe ahụ ị nwere ike ịga n'ihu na-eji nchịkọta akụkọ ị họọrọ maka nnukwu ọrụ gị!
Jul 4, 2007 na 9: 53 AM
Nsogbu dị na nchịkọta ederede ederede bara ọgaranya bụ na ọ na-ejide ihe mkpado ederede ọ bụla (dịka ịtinye vidiyo YouTube).
Jul 1, 2007 na 4: 09 AM
Ngwaahịa ha dị ihe dị ka 70% YTD. Ha ga na-eme ihe ziri ezi!
M na-agbalị izere njikọ ngwaahịa ndị ahụ maka ịkwado njikọ miri emi ma ọ bụ na-ejikọ na thumbnail dị ka ị na-eme na peeji ọgụgụ gị.
Jul 1, 2007 na 10: 57 AM
Enwere m obi ọjọọ na ha, ọ bụghị m? Enwere m nkwanye ùgwù maka Amazon, Robert. Ha agbanweela ụlọ ọrụ mkpọsa na nkesa. Enwere m obi nkoropụ na ụlọ ọrụ dị elu ga-akwụ obere nlebara anya n'ịgbasawanye ohere web.
Ọ bụrụ na ha nwere ike ịmalite API ha dị ka Google nwere, echere m n'ezie na ha nwere ike inwe ọnụọgụ ọnụọgụ abụọ na ahịa weebụ. Companiesfọdụ ụlọ ọrụ na-akpụ akpụ a direction na Amazon nwere ike ịbụ outpaced ma ọ bụrụ na ha na-adịghị ohere itinye ego!
Jul 1, 2007 na 9: 26 AM
Agbalịrị m Amazon maka oge back Naanị m na-edebe obere igbe nchọgharị na Bekee peeji nke nke blọọgụ m don't Enweghị m ndidi iji wulite njikọ m na aka :)
N'aka nke ọzọ, ahụrụ m Roger Johansson si 456BereaStreet bụrụ ihe ịga nke ọma na Amazon? (ọ bụ ezigbo mma CSS mmebe) 🙂
Jul 3, 2007 na 7: 18 AM
Anọ m n'otu ụzọ ahụ gị, Doug.
Ọnwa ole na ole gara aga, agbalịrị m monetize otu n'ime Blogspots m na Associate a wee daba n'otu nsogbu ahụ. Ihe oyiyi ahụ egosighi! Ee ee, ha na-egwu gị. 😈
Jul 9, 2007 na 8: 16 AM
Nke ahụ bụ ezigbo ndụmọdụ. Daalụ!
Aug 28, 2007 na 7: 54 AM
Kee - M na-edozi okporo ụzọ ihe oyiyi mgbe niile na-eche na ọ bụ ahụhụ. N'agbanyeghị nke ahụ, anaghị m eji ha ugbu a, yabụ echere m na ha enweghị ike iti mkpu.
Feb 29, 2008 n’elekere 12:31 nke abali
Enwere m ihe dị iche iche mere m ji mara na Amazon Associates SUCKS. Ọrụ na-abaghị uru na-enweghị nchegbu maka ndị nkwusa ha. Edeela m ya na blọgụ m .. Gbasaa ozi ahụ!
Nov 9, 2008 na 2:43 AM
Ndị mmekọ Amazon nwere ọrụ ahịa ndị ahịa kacha baa uru n'ụwa. Ha na-aza n'ime ụbọchị atọ mana azịza ha bụ INANE. Ha enweghị isi. Ọ dịka na ha anaghị echegbu onwe ha n'ịgụ nchegbu gị, ha na-ekwu ihe nzuzu, enweghị uche, na-abaghị uru. Otu oge ha gwara m ka m zitere ha “ozi ha rịọrọ” mana ha arịọghị ihe ọbụla ma ọlị.
Jun 25, 2008 na 7: 43 PM
M maka otu, dị ka ego site Amazon Associates ma enweghị m ike ikwenye karịa banyere njikọ ụlọ. Enwere m nkụda mmụọ nke ukwuu ole m ga-awụlikwa elu iji nweta njikọ ngwaahịa.
Ọ bụrụ n ’ịchọrọ iji otu n’ime wijetị ha, ọ bụ ikuku. Mana mgbe ịchọrọ njikọ maka ngwaahịa onye ọ bụla, ọ bụ ihe mgbu nke eze.
Ọkt 21, 2008 na 3:18 AM
Na-efu nnukwu oge ihe kpatara na amazon anaghị eme nke ọma maka ọtụtụ mmadụ.
Amazon na-enye gị naanị windo elekere 24 maka ntụgharị gị ịzụta ngwaahịa. emesia i nweghi ihe.
80% nke ndị mmadụ agaghị azụta n'ime awa 24.
Ana m anwale ụfọdụ akwụkwọ kacha mma na amazon na ana m enweta ọtụtụ pịa.
Ekwenyesiri m ike na ọtụtụ ndị ga-azụta ihe n'aka ha ma ọ bụghị n'ime awa 24.
Na 6% m lara na amazon na-enweta onye ahịa ọhụrụ
Cheta, ihe kacha sie ike maka amazon bụ ị nweta ndị ahịa na-akwụ ụgwọ ọhụrụ. Ozugbo ọ mere nke ahụ, ọ ga-eme ọtụtụ ihe karịa site na ndụ nke onye ahịa ahụ.
N'ime ụwa zuru oke, aga m enweta ego ọrụ site n'aka ndị ahịa m na-ezo aka.
O di nwute, m na-ezipu amazon n'efu, ma na-eme ihe ọ bụla maka onwe m.
Jun 18, 2013 na 9: 18 PM
Amzagong na-enye windo a na-akparaghị ókè, mana dịka ụlọ ọrụ niile nwere ihe mgbu na-eto eto, ha abụrụla nnukwu ịnyịnya ibu GREEDY….
Dec 14, 2008 na 8:25 PM
Echere m na ndị mmekọ Amazon ka kacha mma. O doro anya na ụfọdụ ngwaọrụ ahụ dị ntakịrị, ma ọ bụrụ na ị bụ onye na-emepụta ihe, ha na-enye gị ngwaọrụ niile ịchọrọ iji zụọ ahịa.
Jun 18, 2013 na 9: 16 PM
Ọkara ọkara enyere ndị America aka?
Jun 17, 2009 na 3: 57 PM
Amazon.com Associates na ebe nrụọrụ weebụ bụ egwuregwu… M na-enweghị ike imelite m adreesị n'okpuru payee-info.html peeji nke. Ọ bụghị nsogbu na kọmputa m ma ọ bụ na kuki ma ọ bụ na a firewall dị ka Amazon “nkwado” tụrụ aro. Ha gwara m na onweghi ihe ha nwere ike ime iji nyere m aka imelite n’akụkụ ebe mgbago North Carolina na steeti ọzọ. Ya mere, echere m na m ga-emechi akaụntụ Amazon Associate na ọrụ m niile gara aga m na-aga na atrash bin na Amazon agaghị enwe ike ihi ụra abalị ọ bụla karịa ịhapụ m dị ka ndị ha na ha na-akpakọrịta n'ihi na ebe nrụọrụ weebụ ha bụ egwuregwu na nkwado ha nwere ike ' t even melite address m! Agaghị m azụta ihe ọ bụla ọzọ na Amazon.com!
Jun 17, 2009 na 4: 01 PM
Google Adsense na-akwụ ụgwọ ebe nrụọrụ weebụ m ọtụtụ puku US $ mgbe Amazon jusyt na-akwụ m $ 7 - $ 12 kwa ọnwa. Echeghị m na nke ahụ dị mma, m ga-ewepu njikọ amazon na saịtị m n'oge na-adịghị anya.
Jun 17, 2009 na 4: 31 PM
Site n'ụzọ, achọpụtara m na m na-enyefe okporo ụzọ Amazon site na nnukwu weebụsaịtị m maka ihe dịka afọ 6-8 ma amaghị m na a kagbuola ID - Amazon echegbughị echetara m na m na-agbapụ na enweghị mgbọ… ha were nwayọ ma were obi ụtọ were okporo ụzọ na ndị ahịa m zigara ha ma ọ bụghịdị nro jiri obiọma mee ka m mara na m nwere ike nweta ego na ya
Jun 17, 2009 na 6: 11 PM
Nkwado Amazon nyere m adreesị ozi-e maka Amazon Associates Programme nkwado: Assoc-1@amazon.com Nsonaazụ: “A jụrụ adreesị. Ihe kpatara: 550 ”. Ugbu a abụrụ m onye ahịa nke Amazon.com...
Jul 19, 2009 na 11: 32 AM
omg Andrew, ị cheghị na ihe gbanwere mgbe ị na-ahụghị ego ọ bụla si Amazon n'ọnwa ole na ole?
Agbanyeghị, ihe ọzọ mere ha ga-eji na-atụle emelite ọrụ ha bụ na ugbu a na ha enweghị wuru na sub-id nsuso (isiokwu nsuso) arụmọrụ maka ndị nke anyị na-eme PPC…
Ọ bụ Caitlin Gleason
Jun 18, 2013 na 6:37 AM
Kedu ka i si dozie njikọ ahụ? Ana m enwe otu nsogbu ahụ na-anwale ya njikọ na wordpress.